अब दाँत दुखेर उपचार गर्न भारत जानु पर्दैन ! - नेपालबहस
६ लाखको लगानीमा नेपाल डेन्टल फेसियल सेन्टर स्थापना
२५ कार्तिक कैलाली । के तपाई दाँत दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो भए अब चिन्ता लिनु पर्दैन धनगढीमा नेपाल डेन्टल फेसियल सेन्टर आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
डेन्टल फेसियल सेन्टर सञ्चालनसँगै यस क्षेत्रका बासिन्दाले डेन्टल र फेसियलसम्बन्धी अग्रिम उपचार गर्नका लागि काठमाडौं अथवा भारत जानुपर्ने बाध्यता घट्दै जाने भएको छ ।
धनगढीमै कार्यरत पाँच जना डाक्टरको टिमले रु छ लाखको लगानीमा नेपाल डेन्टल फेसियल सेन्टर स्थापना गरेको हो । धनगढीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशभरी डेन्टल र फेसियलसम्बन्धी अग्रिम उपचार गर्ने सेन्टर नभएका बेला नेपाल डेन्टल फेसियल सेन्टर स्थापना गरिएको सञ्चालकमध्येका एक डाक्टर दीपक ठकुराठीले जानकारी दिए ।
उनले भने, “अब सेन्टरको स्थापनाले बाहिर जानुपर्ने समस्या हट्दै जानेछ । चटकपुरस्थित सिपी अस्पतालका सञ्चालक डाक्टर सिपी पाण्डेयले उक्त सेन्टरको उद्घाटन गरे।
Previous articleबेसहारा मानवमुक्त नगर : सडक पेटी, गल्लीमा बस्नेले पाए नयाँ जीवन
Next articleट्र्याक्टर र टिपरले ठक्कर दिँदा एकै दिन दुईको मृत्यु
सरिता गिरीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न सिफारिस